According to Cardinal Charles Maung Bo’s way of thinking, “Christian Ethnic Minorities are also NOT suffering from any atrocities by the Myanmar Military BUT just problem of rebellion. IS is also not doing any crime by killing Christians in US and EU as they are at war with Christians” | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeAccording to Cardinal Charles Maung Bo’s way of thinking, “Christian Ethnic Minorities are also NOT suffering from any atrocities by the Myanmar Military BUT just problem of rebellion. IS is also not doing any crime by killing Christians in US and EU as they are at war with Christians”
According to Cardinal Charles Maung Bo’s way of thinking, “Christian Ethnic Minorities are also NOT suffering from any atrocities by the Myanmar Military BUT just problem of rebellion. IS is also not doing any crime by killing Christians in US and EU as they are at war with Christians”
Yes..Christian Ethnic Minorities are also NOT suffering from any atrocities by the Myanmar Military BUT just problem of rebellion.
IS is also not doing any crime by killing Christians in US and EU as they are at war with Christians.
(I am not supporting the criminal Bama Buddhist military or criminal IS but just mocking this stupid cardinal.)
ကာဒီနယ်လ် Charles Maung Bo ဟာ
ရခိုင်ပြည်နယ်(ရိုဟင်ဂျာ)ဒေသကို
ရိုဟင်ဂျာ မိသားစု ဘယ်နှစုနဲ့ တွေ့ဆုံဘူးပါသလဲ
ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်
အခြေအနေကို တိတိကျကျသိလို့ပြောခဲ့တာဆိုရင်
ကမ္ဘာကို ဒီ့ထက်ရှင်းလင်းအောင် အသိပေးရှင်းလင်း
မိမိ အခွင့်အရေး တစုံတရာအတွက်
သူအကျပ်အတည်းကလွတ်ဖို့
နည်းလမ်းမျိုးစုံကို အသုံးပြု သွားမှာပါ
နောက်ထပ် တခြားဘာသာရေး/လူမျိုးရေး
ဒီအချိ န်မှာ အဲ့ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့
အရည်အချင်း/ကိုယ်ရေကိုယ်သွေး နဲ့
သီလ သမာဓိ / ရိုးသားမှု
ကိုယ်ကျိုးမရှာမှု တွေကို
မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ကြရတော့မှာပါ
ကိုယ်သမိုင်း ကိုယ် ရေးပြကြတာ မြင်ရပါတော့မယ်
ရိုဟင်ဂျာတွေ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခံရမှု မရှိကြောင်း ကာဒီနယ်ဘုန်းတော်ကြီး မိန့်ကြား
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း မြန်မာကက်သလစ်ခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် ချားလ်စ် မောင်ဘိုက မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပြဿနာအပါအဝင် ပဋိပက္ခတွေ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာသာဖြစ်ပြီး၊ လူမျိုးတုံးသုတ်သင်ခံနေရတယ်ဆိုတာ မဟုတ်မှန်ဘူးလို့ ဘုန်းတော်ကြီး ချားလ်စ်မောင်ဘိုက မိန့်ကြားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေ လူမျိုးတုံးသုတ်သင် သတ်ဖြတ်ခံနေရတယ်လို့ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ – (ကာဒီနယ် Charles Maung Bo ကို တွေ့ရစဉ်)
← ဒီကောင်တွေက မေးနေတာမဟုတ်ဘူး အမှန်တရားကို သိချင်တာ မဟုတ်ဘူး စော်ကားနေတာ – များသွားပြီ စော်ကားနေတာလဲ များသွားပြီ ဒီမေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေနေစရာ မလိုဘူး – ခွေးစကားပြောလာတဲ့ကောင်တွေကို ပါးရိုက်ပေးမဲ့ လူပဲ လိုတယ်
ရန်ကုန်က မွတ်စလင်တွေရဲ့ ရာမ်ဇန်ဥပုသ်လ →